Dood kusaabsan xoojinta iyo sare u qaadidda Waxbarashada Caruurta Baahiya Gaarka ah Qaba oo ka dhacday Garoowe – DMS
HomeWararkaDood kusaabsan xoojinta iyo sare u qaadidda Waxbarashada Caruurta Baahiya Gaarka ah Qaba oo ka dhacday Garoowe
Fiidnimadii Arbacada, waxaa magaalada Garoowe ka dhacday dood wadaag kusaabsan waxbarasho loo dhan yahay. Waxaa lagu qaadaa dhigayay muhiimadda ay leedahay waxbarasho ay si buuxda uga qayb qaataan ardayda bahiyaha gaarka ah qaba, kuwaasoo meel hoose iminka uga jira ka qaybgalka waxbarashada Puntland.
Dooddan waxaa fulinayay ururka PMWDO iyo Wasaaradda Waxbarashada waxaana maalgaliyay hay’adda UNICEF, waxaana qaban qaabadeeda iyo fududaynteeda lahaa shirkadda la talinta OGAAL.
Dooddan waxaa looga jawaabayay su’aalo lafdhabar u ah wabxarashada loo dhan yahay sida, sababaha keenay in dadka baahiyaha gaarka ah qaba aysan waxbarashada uga qayb galin sida dadka kale ee ay la nool yihiin iyo sida iskuullada Puntland loogu diyaarin karo inay waxbarasho ka helaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Dhinaca kale waxaa laga dooday, sidii loo heli lahaa bulsho wacyi gashan oo soo dhawaysa dadka baahiyaha gaarka ah qaba si waxbarashadooda iyo mustaqbalkooda guul uga gaaraan.
Xubnaha kalmadaha ka jeediyay kulanka dood wadaagga ah waxaa kamid ahaa: Cabdi Cali Aadan, Guddoomiyaha Dalladda Naafada Puntland, Maamulaha Iskuulka hoose dhexe ee Maxamuud Aw-cusmaan ee Garowe Liibaan Maxamed Maxamuud, iyo lataliye dhanka dadka baahiyaha gaarka ah qaba, Maxamed Cabdullaahi Cali, iyo Guddoomiyaha dalladda dhalinyarada Puntland Liibaan Maxamed Xuseen
Waxbarasho loo dhan yahay waa habka wanaagsan ee ilmaha loo siiyo fursad ay iskuulka ku aadaan, wax ku bartaan isla markaana ku hor mariyaan xirfaddooda si mustaqbalkooda u dhisaan.
Dhinacyadii doodda ka qayb galay waxay ka midaysnaayeen in dadka baahiyaha gaarka ah qaba aysan sidii loo baahnaa Puntland uga helin adeeg waxbarasho, agabkii waxbarasho, daryeel bulsho, iyo inay helaan nolol la siman sida dadka kale.
Guddoomiyaha Ururka Naafada Puntland Cabdi Cali Aadan ayaa ku taliyay in dawladda iyo shacabkaba xil wayn iska saaraan sidii si isku tashi ah dadkaasi waxbarashadooda sare loogu qaadi lahaa, gaar ahaan iskuullada laga dhigo kuwo leh macallimiin tabobaran, kuwo u sahlan inay dadka baahiyaha qaba ay soo galaan kana baxaan si sahlan, iyo la keeno qalabkii wax lagu bari lahaa dadka baahiyaha gaark ah qaba.
Maamulaha Iskuulka Maxamuud Aw-Cusmaan, Liibaan Maxamed Maxamuud ayaa xusay, in bulsho ay wax ku noqon karto isku tashi, oo loo baahan yahay in dadka baahiyaha gaarka ah laga daayo faquuqa iyo magacyada loogu yeerayo si ay waxbarashada guul uga gaaraan. Wuxuu xusay in taageero bannaanka ah aan wax lagu noqon karin, dadka baahiyaha gaarka ah qabana ay yihiin dadkoodii oo garab qabasho ugabaahan.
Waxbarasho loo dhan yahay waa in ardayda oo dhan ay wada dhigtaan hal iskuul iyo hal fasal. Macneheedu waa inaan fursadda loo diidin ardayda qaarkood, sida kuwa baahiyaha gaarka ah qaba, oo ay gabdhuhu ugu horeeyaan. Waa fursad waxbarsho oo dhammaan caruurto ay si garbo siman ah uga faa’iidaysanayaan fursadda waxbarasho. Waxbarasho loo dhan yahay waxaa lagu gaari karaa dadaal ka yimada dhinacyo badan oo bulshada ah.
Sida ay xustay Qaramada Midoobay 98 malyan oo caruur ah oo ku kala nool daafaha caalamka ayaa la nool naafanimo ama leh baahiyo gaar ah. Sida caruurta kalaba, caruurta baahiyaha gaarka ah qaba waxay leeyihiin damac , rajo ama riyo mustaqbal. Sida caruurta kalaba waxay u baahan yihiin waxbarasho tayo sare leh si ay u hor mariyaan xirfaddooda una muujiyaan awoodda dhabta ah ee ay leeyihiin.